bilaogy Juan Herranz
Hevitra momba ny sarimihetsika. Ny momba ny sarimihetsika tsara indrindra amin'ny talen'ny maro, ary koa ny fahitako sy ny fanakiako ny zava-bitan'ny mpilalao.
Top3 Ewan McGregor Movies
Ao ambadiky ny olo-malaza lehibe amin'ny sinema dia misy andalana faharoa feno mpilalao sy mpilalao sarimihetsika maniry mafy ny handray anjara amin'ny fakàna an-keriny ny voninahitry ny sinema avy amin'ny Pitt, Deep, DiCaprio ary ny orinasa. Ewan McGregor dia iray amin'ireo mpilalao matanjaka sy matanjaka. Mpandika teny mahay…
Russell Crowe Top 3 Movies
Mendrika ny hanipy alahelo be i Russell Crowe ho loharanon'ny seho maro. Ary mendrika izany fa toa nilaozana ara-batana izy io tato anatin'ny taona vitsivitsy (na izany no lazaina manoloana izay mety ho olana hafa na fepetra takiana amin'ny script). Fa tsy…
Sarimihetsika 3 tsara indrindra an'i Javier Cámara
Amiko dia demokratika kokoa ny sinema Espaniola, mifanaraka kokoa amin'ny zava-misy amin'ny hatsaran'ny filalaovana. Raha ampitahaina amin'ny Hollywood, ny tiako holazaina. Satria ao yankeeland raha tsara tarehy ianao dia afaka mianatra mihetsika amin'ny lalitra, mandritra izany fotoana izany dia mampitolagaga ny mpijery avy amin'ny vatana ka ...
3 tsara indrindra Daniel Day-Lewis Movies
Rehefa mandeha ny fotoana, dia tsy hahatsikaritra ny fahaiza-manao fandikan-teny toa an'i Daniel Day-Lewis isika. Ny hamafin'ny nitantanany ny andraikitra tsirairay no tena zava-dehibe, ny tiana holazaina dia ny mety ho niaretany tamin'izany fitafy sy ranomaso izay indraindray mamely ireo izay mamela ny zava-drehetra amin'ny lafiny rehetra…
Sarimihetsika 3 ambony indrindra an'i Robert de Niro
Ndeha adino ny momba an'i Robert de Niro farany nanaitra an'io mpilalao sarimihetsika malaza hafa nisy azy io. Mety ho henjana izany, saingy izany tokoa, ny iray amin'ireo karazana celluloid malaza indrindra dia efa ela no nandalo tamin'ny alahelo mihoatra noho ny voninahitra ho an'ny sarimihetsika tsy misy an'io teboka amin'ny sinema mahazatra ...
Hatramin'ny fisotroan-drononony teo am-pototry ny làlan'ny Lakers, i Jack Nicholson dia mbola mampiseho ny heriny miavaka izay nomeny foana ny toetrany. Fandikana izay miseho amin'ny taona 70 efa lavitra sy psychedelic ka hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Hazakazaka tsy manan-tsahala amin’izao fotoana izao...
Raha ny momba ny katalaogy Matt Damon dia afaka mahita olana isika. Tsy mora ny manisy marika ny lehilahy toa azy, izay mety handalo ho an'ny namanao tamin'ny fahazazanao izay tsy ho eritreretinao velively ho mpilalao sarimihetsika ary tsy dia piraty toa an'i Brad Pitt. Ary mbola…
Jennifer Lawrence's Top 3 Movies
Mpilalao sarimihetsika iray izay manangona rejisitra mpandika teny toy ny hoe mora nampiharina ny hatsaran-toetrany chameleonic. Tsy isalasalana fa hahafaly an'i Jennifer Lawrence ny talen'ny taloha toa an'i Hitchcock. Satria ao anatin'izany no ahitantsika ny fiaviana tsy ampoizina izay tadiavin'ny sinema ho toy ny antony manaitra. Zavatra…
Ny sarimihetsika 3 tsara indrindra an'i Luis Tosar
Misy mpilalao tonga lafatra ho an'ny karazana. Luis Tosar sy ny fiatoana amin'ny heviny malalaka dia iray amin'ireo fihaonana mahafaly indrindra amin'ny sarimihetsika Espaniola. Ary io mpilalao sarimihetsika Galisiana io dia afaka mampiditra ny ratsy amin'ny endriny rehetra; na ny mifanohitra amin'izany aza,…
Top3 Keanu Reeves Movies
Sarotra ny mieritreritra an'i Keanu Reeves ary mametraka azy haingana amin'ny stereotype mpilalao sarimihetsika manokana. Na amin'ny fanapahan-keviny manokana, entin'ny fitakian'ny asa, na koa, mazava ho azy, amin'ny fivoaran'ny fandikana, i Keanu antitra tsara dia nanamboatra ny tenany tamin'ny hafainganam-pandeha an-tery. Ny an'ilay zazalahy izay nanarona ny sariny…
Ny sarimihetsika 3 tsara indrindra an'i Mario Casas
Miaraka amin'i Mario Casas misy zavatra hafahafa mitranga amiko. Amin'ny lafiny iray dia heveriko fa mpilalao mahay izy, saingy amin'ny lafiny iray dia mitovy foana ny toetra aseho amiko, na inona na inona anjara asako. Tsy maintsy resaka momba ny fanatrehany voamarika na ny feony somary ambany, toy ny fiezahana hibitsibitsika ny…